Ogaden News Agency (ONA) – Gudomiyaha Abaabulka Iyo Arrimaha Bulshada Diirane oo Wareysi siiyay Barnaamijka Ilays
Gudomiyaha Abaabulka Iyo Arrimaha Bulshada Diirane oo Wareysi siiyay Barnaamijka Ilays
Posted by ONA Admin	/ May 21, 2012
Gudoomiyaha Abaabulka Iyo Arrimaha Bulshada Mudane Maxamed Cabdi Yaasiin Diirane ayaa siiyay wareysi Barnaamijka Ilays. gudomiyaha ayaa wareysigan lagu su’aalay safar uu ku tagay waqooyiga Amerika isaga oo muddo laba bilood iyo dheeraad kuwareegayay wadanka USA halkaas uu kula kulmay Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya iyo shacabka Somaliweynba.
Gudoonka ayaa hadaba ku tilmaamay socdaalkiisa innuu ahaa mid uu ugu xog waramayay shacabka Somalida Ogadeniya iyo somaliweyn ee ku nool waqooyi Amerika. isaga oo kala hadlayay Daggaalka Xoriyad doon ee ka socda Ogadeniya sidoo kale waxa uu siinayay warbixinaha kasokow siminaaro loogu talo galay Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya oo ku saabsan nidaamka maamul iyo qorsheyaal ku aadan dhaqdhaqaaqa halganka. Waxa uu gudoonku soo maray 30 State (Gobol) oo kamid ah Wadanka Mareykanka isaga oo kaqeyb galay shirar uu kula hadlayay Jaaliyadaha Ogadeniya iyo shacabka somaliyeed ee taagersan halganka kulamo waaweyn oo dhan 38 shir oo ahaa kuwo u furan bulshada.
Gudoonka ayaa sidoo kale waxa uu si gooni gooni ah kula kulmay Ururada bulshada ee Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya sida Ururka dhalinta, ururka haweenka iyo haayadaha kale ee ka koobanyihiin jaaliyadaha Somalida Ogadeniya.
Waxa uu si waafi ah Hoggaanku uga waramay nolol maalmeedka iyo dhismaha bulshada Somalida Ogadeniya ee ku nool wadanka USA.
Hadaba Gudoomiyaha ayaa umahad celiyay shacabweynihii u heelana halganka Ogadeniya ee uu kula soo kulmay Wadanka Mareykanka. Waxaana barnaamijkan lagu su’alay arrimo badan oo ay kamid yihiin dhaqdhaqaaqa Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya iyo doorkooda laga rabo inay ka ciyaaraan, Wacyiga waqtigan ka jira Ogadeniya,
Heshiiska suuqa socda ee lagu sheegayo in ONLF heshiis la gashay Ethiopia waxa kajira, ama sida ay wax ujiraan
Shidaalka Ogadeniya ee Ethiopia sheegtay in lasoo saarayo muddo sanad ah gudaheed.
Iyo su aalo kale oo xasaasi ah kala soco barnaamijka Ilays ee Arbacadan Inshallaah.